बियर पिउनुको दश फाईदाहरु – Ram Kumar Pariyar
Next रणविर-कट्ररिना को ईङ्गेजमेन्ट भएको खुलासा
Previous पेटको बोसो घटाउने घरेलु तरिका
तपाई वियर पिउनु हुन्छ ? पिउनु हुन्छ भने राम्रो ।
तर पिउनु हुन्न भनेपनि तपाइँलाई वियर खाँदा यति धरै फाइदा छन् भन्दा अनौठो लाग्ला । अमेरिकामा हालै गरिएको एक अध्यनले वियर पिउने मानिसलाई मृगौलाको पत्थरी हुने खतरा , नखानेको तुलनामा निक्कै कम हुन्छ भन्ने पत्ता लगाएको छ । यस बाहेक बियर पिउदाका फाईदा अरु के के छ्न त यहाँ प्रस्तुत गरेको छु ।
१. थोरै मात्रामा वियर पिउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । अल्कोहलको मात्रा बढी हुँदा स्वास्थ्यमा खरावी हुने कुरा सबैलाई थाहा छ । तर ठिक्क मात्रामा वियर पिउँदा भने स्वास्थ्यका लागि राम्रो हुने नयाँ अध्यनले देखाएको छ ।
५. वियरले तपाइँलाई चिन्ता मुक्त बनाउँछ । यसले स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा तपाइँलाई हलुका महसुस हुन्छ । साथीसँग बसेर वियर पिएपछि तपाइँले फ्रेस महसुस गर्ने कारण पनि यही हो ।
९. वियर र स्वास्थ्यबीच सम्बन्ध छ । वियरमा पाइने एक्‍थोह्यूमल भनिने तत्वले शरीरमा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता वृद्धी गर्छ । जर्मनीमा क्यान्सरबाट बँच्न मानिसहरु वियर पिउँछन् ।
स्वास्थ्यका लागि वियर पिउनुस् ।